Turkiga oo Bangladesh ugu yeeray inay dejiso qaxootiga Rohingya. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka September 3, 2017	0 158 Views
Ankara (Himilonews) – Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga, Mevlüt Çavuşoğlu ayaa ugu yeeray xukuumadda dalka Bangladesh inay albaabada u furto Muslimiinta Rohingya ee kasoo baxsanaya qalalaasaha ka jira gobalka Rakhine ee dalka Myanmar.
Isaga oo ka hadlayay fagaare ku yaalla Antalya maalintii Jimcaha, Cavusoglu wuxuu ku celiyay yeermadood ku wajahan Bangladesh oo ah inay albaabada u furto Muslimiinta Rohingya – Turkiguna uu bixin doono dhammaan wixii qarash ah ee ku baxaya.
“Waxaan abaabulnay Ururka Islaamka iyo qeybaha kale ee dunida Muslimka, waxaana aynu qaban doonnaa shir degdeg ah oo lagaga arrrinsanayo xaaladda Muslimiinta Rohingya,” ayuu yiri “Waxaynu u baahannahay inaan xal buuxa u helno mushkiladda heysata walaalaha Muslimiinta ku dhiban Burma.”
Wuxuu sheegay in iyaga mooyee dunida kale ee Muslimka aysan wax war ah kasoo saarin dhibaatada lagu hayo Muslimiinta.
Kaalmada gargaarka caalamiga ah, Turkiga waa dalka labaad ee ku xiga Maraykanka kaas oo adduun dhan 6 bilyan ku bixiya howlaha gurmadka iyo gargaarka caalamiga ah.
Qalalaasaha lagu hayo Muslimiinta Burma waxay noqdeen joogto hadiyo goor soo laablaabta. Kufsi, dilal, jirdil iyo barakicin joogto ah ayay kala kulmeen dalka Buudiska u badan ee Burma halkaas oo militarigu ay kaalin xoogan kaga jiraan gumaadka taniyo sanadkii 2012.
Dhacdooyinkii ugu danbeeyey waxaa lagu gubay guryo: waxaana lagu gowracay carruur yaryar oo aan waxba galabsan.
QM ayaa ku tilmaantay xasuuqa lagu hayo Muslimiinta Burma midkii ugu xumaa ee looga geysto tiro yar ku nool dalalka looga badan yahay.
Next: Maxaad ka og tahay dhibaatada Bacdu ku leedahay nolosha iyo deegaanka?